MUQDISHO, Soomaaliya - War-saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa looga hadlay dagaalka saaka oo Talaado ahayd dib uga qarxay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, kaasoo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Somaliland.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu aad uga walaacsan dagaalka, islamarkaaan wuxuu ugu baaqay labadda dhinac inay joojiyaan gacan-ka-hadalka.
“Waxaa nasiib daro ah in iyadoo bisha Ramadaan leysku diyaarinayo uu dhiig si macno la’aan ah u daato. Sidaas darteeda labada dhinac [Puntland iyo Somaliland] waxaan ugu baaqayaa inay si shuruud la’aan ah ujoojiyaan dagaalka,” ayaa lagu yiri warka.
Baaqadan wuxuu kusoo aadayaa saacado un kadib markii Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo luqad adag ku hadlaya uu sheegay in dagaalka Tukaraq ay gadaal ka riixeyso dowladda Federaalka ayna “cashir u dhigi doonan”.
War-saxaafadeedka kama muuqdo wax jawaab ah oo ku aadan eedeynta Muuse Biixi ee ah inay dowladda uu hogaamiyo Farmaajo ay duulaan ku qaaday Somaliland.
Puntland iyo Somaliland ayaa siyaabo kala duwan ugu dagaalamayay deegaanka Tukaraq tan iyo 2002, waxaana dhinac walba uu sheegtaa inuu leeyahay maamulka Tukaraq, oo ka tirsan gobolka Sool.
HOOS KA AKHRISO WAR SAXAAFADEEDKA: